Nampahafantatra tamin’ny alalan’ny kaonty «facebook»-ny ny minisitra teo aloha ny Fanabeazam-pirenena, Rabary Paul, fa anisan’ny tratran’ny valanaretina Covid-19 ny tenany. Ady aman’aina ny aretina satria mandraingiraingy izay tratrany amin’ny vidim-panafody sy ny takaitra avelan’ny aretina ka miantso ny rehetra hitondra am-bavaka azy ity minisitra teo aloha ity satria mahatsiaro ho tena marary.
Nanapa-kevitra ny hanakatona ny fiangonana FLM ao Vakinankaratra manontolo ny foiben’ ny FLM birao foiben’ny Synodam-paritany Avaratr’i Mania (Spam) rehefa niara-nidinika tamin’ny lehiben’ny faritra ao an-toerana. Hatao izany ho fiarovana ny fiparitahan’ny valanaretina ao an-toerana, araka ny tatitra. Tetsy andaniny, nandiso ny vaovao miely ny foiben’ny FLM Spam ary nilaza fa tsy mbola nisy lavon’ny Covid-19 na ny pastora na ny kristianina ao an-toerana.
Nangataka fanazavana teny anivon’ny sefo fokontany Ivandry ny mponina, omaly, momba ny vaovao milaza fa hatao toeram-pandraisana ny olona mitondra ny tsimokaretina Coronavirus ny lycée Teknika Alarobia. Miangavy ny fitondrana izy ireo ny hamindrana amin’ny toerana tsy manakaiky tanàna ny toeram-pandraisana. «Raha sendra misy olona iray fotsiny mivoaka avy ao amin’ny LTP miantsena na mividy zavatra ety amin’ny tsena manodidina, hanao ahoana ny zavatra hitranga», hoy ny solontenan’ny mponina.
Olona efatra no voaporofo fa mitondra tsimokaretina Coronavirus ao Ampefy. Nandray fanapahan-kevitra ny tomponandraikitra any an-toerana manoloana izany ka mikatona avokoa, manomboka amin’ny 1 ora tolakandro, ny tsena rehetra ao Soavinandriana sy ny manodidina. Mitsahatra ny fampianarana rehetra ary tsy misy fiangonana misokatra. Miato tanteraka ny fitaterana mihazo an’i Faratsiho sy Ampefy ankoatra ny fitaterana ny sakafo sy ireo kojakoja ilaina andavanandro. Foana ny tsenan’ny tantsaha isaky ny alatsinainy.